Nezvedu - Staba Electric Co., Ltd.
Kubva 2017, Staba atanga kuita tsvagiridzo nekusimudzira pane izvo PD GaN charger zvigadzirwa.
GaN tech ndiyo shanduko yejaja indasitiri, inojaja inogona kushandisa diki transformer uye zvimwe zvinounza zvinhu, nokudaro ichideredza zvakaringana GaN charger saizi uye kupisa kupisa, uye kugadzirisa kugona.
Zvichakadaro ramba uchiunza otomatiki zvigadzirwa zvemakore apfuura, kwete chete kudzora mutengo wevashandi, kuwedzera kugadzirwa, asi zvakare kuwedzera Staba PD madzirojaja mutengo kukwikwidza, uye nekuvandudza mhando kusvika padanho repamusoro neiyo otomatiki tekinoroji; kuunza yazvino otomatiki bvunzo system uye kuchembera sisitimu, kudzikisa mari yevashandi panguva imwe chete, kugadzirisa PD usb charger mhando kune yepasirese nhanho, chigadzirwa kutadza chiyero kunosvika PPM.
Munguva yekusimudzira, Staba anotarisisa zvakanyanya kuunganidzwa kwekodzero dzezvepfuma nekumisikidzwa kwekambani manejimendi manejimendi. Staba ndiro rekutanga bhizinesi mudunhu medu kupasisa kubvumidzwa kweIPMS yeGB / T29490-2013, kuve nematanhatu ekutanga epatent muUnited States uye muEuropean Union, uye anopfuura makumi mashanu nemasere ekutanga eChina ekugadzira patent uye ekushandisa modhi patent.
Staba yakatenderwa / kudzoreredzwa senyika yepamusoro-tekinoroji bhizinesi katatu akateedzana nguva, isu tine edu maviri emakambani tekinoroji nzvimbo: Guangdong Province Intelligent Power Engineering Technology Center, uye Zhongshan Guta Simba Chigadzirwa Injiniya Technology Center. Kubva pazuva rekutanga rekumisikidzwa, iyo ERP software system uye ISO9001 manejimendi system yakaitwa mune ese mativi emakambani manejimendi, ichiona kushanda kwakanaka uye kwakaringana kwesisitimu. Parizvino tine vashandi mazana matatu nemakumi matatu, makumi matatu nevatatu vari veR & D system uye makumi matatu nemasere ari ehurongwa hwekutungamira makambani. Panguva imwecheteyo, isu tine kubatana kwakasimba uye kudyidzana kwekubvunzana nemasangano mazhinji ekutsvagisa uye nyanzvi muindastiri, kuyedza kugadzira zvigadzirwa zvedu, masevhisi uye tekinoroji pamberi peindasitiri.
Staba inoda kugadzira win-win kukosha pamwe nevatengi nemhando yepamusoro, yemakwikwi mutengo, nekukurumidza kupindura lead-nguva uye rutsigiro.
Kubudirira Inonyanya kugara iri purofiti kana yemhando yekupona pasi pano
Innovation Musimboti wehunyanzvi kushushikana kwevanhu uye kugutsikana kwevatengi
Mutengi Chekutanga Kutenda moyo ndiko kwakanyanya kukosha, Kukura kwedu hakuparadzanisike kubva kune vatengi